McAllen, TX • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
McAllen no tanàna lehibe indrindra any Hidalgo County, Texas, Etazonia, ary ny tanàna be mponina indrindra faha-22 ao Texas. Any amin'ny tendrony atsimo amin'ny fanjakana any amin'ny Lohasahan'i Rio Grande no misy azy. Ny faritry ny tanàna dia miitatra mianatsimo hatrany Rio Grande, ampitan'ny tanànan'i Reynosa, Mexico. McAllen dia sahabo ho 70 km any andrefan'ny Hoalan'i Mexico. Tamin'ny taona 110, ny isan'ny mponina ao McAllen dia tombanana ho 2017.